Ahiahy trafikan-taova tany Toamasina :: Nalefa nody ilay mpanampy nilaza ho nahita lohan’olona • AoRaha
Ahiahy trafikan-taova tany Toamasina Nalefa nody ilay mpanampy nilaza ho nahita lohan’olona
Nalefan’ny mpanao famotorana nody ilay vehivavy, mpanampy an-trano, nilaza ho nahita lohan’olona tao amin’ny tokantrano iray, tany Salazamay Toamasina. Voalaza fa tsy misy mifandray avokoa ny zavatra noteneniny nandritra ny famotorana. Soa fa voaaron’ny mpitandro filaminana ny tranon’ilay olona izay saika niharan’ny fitsaram-bahoaka, rehefa velona ny horakoraka momba ny ahiahy halatra taova tao.
“Natao avokoa ny famotorana rehetra momba iny tranga niteraka savorovoro teto Toamasina iny. Nosavaina ny tranon’ilay olona voatondro fa nahitana lohan’olona. Tsy nisy na inona na inona mampiahiahy hita tao. Nalaina am-bavany sy natao fanadihadiana lalina ny tompon’ny trano. Nantsoina nalaina am-bavany ny vehivavy iray nilaza ho nahita ilay lohan’olona. Tsy nisy zavatra mazava nolazainy fa mihodinkodina fotsiny izy.
Taorian’ny fanapahan-kevitry ny Fampanoavana any Toamasina dia nalefa nody ilay vehivavy, mpanampy an-trano. “Raha misy kosa anefa mety ilàna azy tampoka amin’ny tohin’ny fanadihadiana dia azo antsoina avy hatrany, araka ny toromarika nomena azy”, hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny mpitandro filaminana nanao famotorana ity raharaha ity.
Zava-doza tsy hita pesipesenina no mety nitranga raha tara kely ny fandraisan’andraikitr’ireo mpitandro filaminana tany Toamasina noho ity tranga ity, araka ny fitantaran’ireo mponina any Toamasina.
Niely ny feo fa nahita lohan’olona tao amin’ny efitra fidiovana ny vehivavy mpanampy iray vao niditra niasa tao amin’ilay trano. Nitangorona vetivety ireo olona. Nihamaro izy ireo hatramin’ny misasakalina no nikasa handroba sy handoro an’io trano io. Voatery nampiasa entona mandatsa-dranomaso ireo mpitandro filaminana tonga ara-potoana teny an-toerana. Voaparitaka ihany ireo andian’olona, taorian’izay. Noesorina tao ny tompon’ilay trano, izay vehivavy manodidina ny 80 taona. Milamina ny any an-toerana amin’izao fotoana izao, saingy araka ny loharanom-baovao avy amin’ny Fitsarana any an-toerana dia mbola manohy hatrany ny fikarohana ny marina sy izay mety ho ambadik’iny tranga iny izy ireo.
Fandrobana mpandraharaha :: Voasambotra ireo nanodinkodina vola an-jatony tapitrisa ariary
Fahamaizana tany Antsirabe :: Kilan’ny afo ireo trano lehibe telo tao Atsinanantsena